“Tsy manao na inona na inona amin’ny fifampiandaniana, na mandrani-tena foana fa amin’ny fanetren-tena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany” Fil. 2:3
Ny mpanompon’Andriamanitra dia natao hiasa ao anatin’ny firindrana tanteraka. Mitarika ho amin’ny fitsitokotokoana sy ny adilahy ary ny korontana ny tsy fitovian-kevitra. Nolazaina tamiko fa tsy ilain’ny fiangonantsika ny handany ny fotoany amin’ny adilahy. Raha miady mafy hahazo ny toerana ambony indrindra ny toe-tsain’ny tsy fitovian-kevitra dia ajanony faingana izany ka alamino izay tokony hamboarina, raha tsy izany dia ho avy haingana i Kristy hanaisotra ny fanaovan-jironao tsy ho eo amin’ny toerany intsony. Aoka hisy ny fibebahana lalina indrindra. Aoka ny Fanahin’ Andriamanitra hizaha ny saina sy ny fo ka hanaisotra izay rehetra misakana ny fanavaozana ilaina. Raha tsy mbola tanteraka ireo dia tsy afaka hanafy ny heriny sy ny fahasoavany amintsika Andriamanitra. Raha tsy mbola nomena antsika ny heriny sy ny fahasoavany dia ho tafintohina ny olona ka ho lavo ary tsy hahafantatra akory ny toerana nahalavoany.
Ny fitiavan’i Kristy no fatorana mampifamatotra ny fo sy ny sain’ny mpino.
Nalatsaka ho an’ny taranak’olombelona iray manontolo ny ran’i Kristy. Tsy tokony hisy ho very na dia iray aza. Raha misy ny very dia satria nisafidy ny hanakalo ny fiainam-pahasambarana mandrakizay amin’izay fomba fiaina tiany izy. Izany no safidy nataon’i Satana ka amin’izao fotoana izao ny asany sy ny fanjakany dia manamabara ny toetr’izany safidiny izany. Ny heloka bevava sy ny fahoriana manenika ny tontolontsika, ny vonoan’olona mampihoron-koditra mpiseho isan’andro dia vokatry ny fileferan’ny olona eo ambanin’ny fitsipik’i Satana.
Ry anadahiko sy rahavaviko, vakio hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ny bokin’ny Apôkalipsy ka anontanio ny tenanareo raha mbola tokony handany fotoana amin’ny adilahy sy adihevitra diso toerana ihany ianareo, ary saintsaino amin’izay fa mihazakazaka tokoa ny fotoana anatonantsika ilay fotoan-tsarotra lehibe farany. Ireo izay miezaka ny hampiseho fa tsy misy heviny manokana ireo fitsarana alefan’Andriamanitra ety ambony tany amin’izao fotoana izao dia ho voatery hanakatra izay zavatra tsy tiany hotakarina dieny izao ankehitriny izao.